Dowladda Turkiga oo 1-Milyan oo doolar ugu deeqday howlgalka AMISOM – Radio Daljir
Janaayo 29, 2013 4:52 b 0
Addis ababa, Jan 29 – Dowladda Turkiga ayaa ugu deeqday howlgalka Midowga Afrika uu ka wado Soomaaliya ee AMISOM lacag dhan hal milyan oo doolar oo lagu kabi doono qarashaadka kubaxa ciidamada AMISOM.
Wasiirka horumarinta Turkiga Jawdat Yilmaz oo magalada Addisababa ee xarunta Midwoga Afrika uga qaybgalay shirmadaxeedka Midowga Afrika ayaa waxaa uu ku wareejiyay guddiga nabadgalyada Midowga Afrika hal milyan oo doolar.
Yilmaz ayaa u sheegay xubnaha Midowga Afrika lacagatani inaysan ahayn markii ugu horaysay ,? balse sanadkii 2009-kii dhaqaalle dhan hal milyan oo doolar ay ugu deeqeen howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Lacagta ayuu sheegay in loo baahanyahay in wax looga qabto amaanka Soomaaliya oo ay hormuud u yihiin ciidamada AMISOM.
Midowga Afrika ayaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya horay ugu soo diray ciidamo dhan 18-kun kuwaasi oo ciidamada dowladda Soomaaliya ka taageeray la wareegidda gobolo ay maamulayeen ururka Al-Shabaab.